“Tsy Misy Rà Ho an’ny Fiheboheboana!” Manohitra Ny Foaran’ny Hoditra Biby Ireo Mpiaro Ny Zon’ny Biby Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2015 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, Nederlands, Español, Italiano, English
Maherin'ny mpikatroka mafana fo miisa 100 mpiaro ny zon'ireo biby no nanao hetsi-panoherana an'ilay foaran'ny hoditra biby, ny 25 Febroary 2015 teo. Sary avy tamin'ny Facebook-n'i Che Siaoyang.
Sahala amin'ny toeram-pivarotana goavambe ho an'ireo entana manaitra maso ho an'ny noveau riche – mpanankarena vaovao – an'ny taniben'i Shina, “toeram-pivarotana hoditra biby eran-tany voalohany” i Hong Kong, ary ny Foara Maneran-tany ho an'ny Hoditra Biby sy ny Lamaody isan-taona anìo an-tanàna, raha araka ny Federasiônan'ny Hoditra Biby ao Hong Kong, no hetsika lehibe indrindra maneran-tany ho an'ireo mpankafy hoditra biby.
Tamin'ity taona ity, natao tao amin'ny Foiben'ny Fifanarahana sy Fampirantiana ao Hong Kong ny 25 ka hatramin'ny 28 Febroary ilay foara, izay nandraisan'ireo mpihira pop malaza eo an-toerana sy ireo mpiasam-panjakana anjara amin'ny fetim-panokafana. Nahasintona mpikatroka mafana fo mpiaro ny zon'ny biby miisa maherin'ny 100 ihany koa ilay hetsika, izay nanohitra ny haratsian-toetran'ny indostria amin'ireo biby.
Miaro ny tontolo iainana ny lamaodin'ny hoditra biby, araka ilay dokam-barotra. Sary avy tamin'ny lahatsoratra momba ny biby HK.
Nandefa sarin'ireo biby maty ary koa ireo teny faneva manohitra ny fampiasàna hoditra biby toy ny hoe “Tsy misy Rà ho an'ny Fiheboheboana” sy hoe “Tsy mila tsenan'ny hoditra biby intsony”, ireo mpanao hetsi-panoherana, raha nitsangana teo amin'ny toerana nanaovana ny hetsika izy ireo. Ho valin'izay, nanao dokam-barotra tamin'ireo gazety teo an-toerana ireo mpisolo tena ny indostrian'ny hoditra biby, mba hanelezana hevitra hoe “miaro ny tontolo iainana” ny fandraharahana ataon-dry zareo.
Mark Mak, iray amin'ireo mpikarakara ny hetsi-panoherana, dia nanamafy tamin'ny Inmediahk.net ny fihatsaram-belatsihin'ilay indostria:
動保和皮草工業的人是一定對立的，根本不存在任何妥協的空間。 […] 原來他們想嘗試做說客，說服我們香港的皮草業是何等人道[…] 而他們也是很愛動物的。
皮草業的朋友也愛動物，此話實在驚天地泣鬼神。其說法是，他們為了保護瀕臨絕種的野生動物如雪地的銀孤，堅決不會用捕捉回來的動物作皮草，他們的皮毛全都是來自養殖場，即是自己養的動物自己殺，自己殺了的動物自己用。 啊！ 這就是他們所說的「愛護動物，保護生態」！ […] 他們亦解釋，坊間流傳的「活剝皮草」絕對不會出現在香港毛皮業協會。 他們出售的所有制品都有歐洲的一級認證，由品質到制作過程都有嚴格監控，不可能有虐待動物的情況出現。
我先退一步，完全相信這個說法。 但就可以合理化「謀皮害命」的行為嗎？而且謀皮，只是為了炫耀，不是為了求存，那不是很缺德的行為嗎？ 再說，即管香港的皮毛業較為人道，但在中國內地將動物活剝生扑是人所共知的事實，香港人消費中的皮毛很大部份都是來自內地的， 而香港毛皮業協會每年搞個大型的皮草展，將使用皮毛等同為時尚的潮流，你不就是最大的幫兇嗎？
Tsy misy mihitsy toerana ho an'ny marimaritra iraisana eo amin'ny indostrian'ny hoditra biby sy ny zon'ny biby. […] Niezaka ny handresy lahatra antsika izy ireo fa manaja ny maha olona tokoa ny indostrian'ny hoditra biby, miaro ny zava-maitso ary tia biby ry zareo.
Mahatezitra ahy ny mieritreritra fa afaka milaza hoe tia biby ny indostrian'ny hoditra biby. milaza izy ireo fa tsy hampiasa ireo biby voasambotra ho an'ny vokatra hoditra biby, mba hiarovana ireo biby mpiriaria efa mila ho lany tarangna, toy ny fosa fotsy. Avy any amin'ireo fiompiana daholo ireo hoditra bibin'izy ireo, izay midika fa mamono ny bibiny izy ireo mba ho ampiasainy. Gosh! Izany no antsoiny hoe “Tia biby sy miaro ny tontolo iainana” […] Nanazava ihany koa izy ireo fa tsy manala hoditra ireo biby mbola velona, ary nahazo ny fanamarinana Ambaratonga-A any Eorôpa ireo vokatra avy aminy, izay midika fa ny làlam-pamokarana sy ny hatsaràn'ny vokatra dia araha-maso sao mety misy fanararaotana amin'ireo biby.
Avelao aho hihemotra kely ary hiaiky ny kaontin'izy ireo ho toy ny marina. Afaka ekentsika ve ary izany ny zava-misy fa mamono izy ireo hahazoana hoditra biby? Ary ho an'ny fiheboheboana fotsiny io fa tsy hoe ho an'ny fivelomana. Tsy manohitra ny toe-tsaina ve izany? Fanampin'izay, na dia manaja ny maha olona kokoa aza ny indostrian'ny hoditra biby any Hong Kong, fantatsika rehetra fa avy any amin'ny taniben'i Shina ny ankamaroan'ireo vokatra hoditra biby any Hong Kong. Isan-taona, manao io foaran'ny hoditra biby io ny Federasiônan'ny hoditra biby, mba hampielezana ny hevitra fa manaraka lamaody ny hoditra biby, saingy tsy manampy ny famonoana tsy araka ny maha olona ve izany [io fampielezan-kevitra io]?
Hita tokoa fa, mikendry manokana ireo izay mitady entana lafo vidy sy tsara ny indostrian'ny hoditra biby ao Hong Kong, raha nandrakotra ny tsena anatin'i Hong Kong kosa ireo hoditra biby moravidy avy any amin'ny taniben'i Shina, izay tsy voaara-maso akaiky ny indostria.
Ny vondrona Facebook “Say No to Cheap Fur” (Tsia ho an'ny Hoditra biby Mora Vidy) , dia manipika fa azo avy amin'ireo biby tena izy ihany koa ireo hoditra biby mora be ireo:
“[Raha] avy tany amin'ny Garden Street [toeram-pividianana amin'ny vidiny mora] ve ireo akanjoko, ahoana no ahafahan'izy ireo mampiasa hoditra biby tena izy?”
Tsia Tsia Tsia! Maro ireo olona mieritreritra toy izany [hoe tsy tena hoditra ireo hoditra mora]. Ny zava-misy anefa dia hita eny rehetra eny ny hoditra biby tena izy, eny amin'ny vozon'ireo akanjo mafana, amin'ireo famatoram-bolo, amin'ireo kiraro. Manodidina ny folo ka hatramin'ny zato dolara Hong Kong [$2-100] eo no vidiny. Ireo bitro, “ratons laveurs”, ary na ireo saka sy alika aza, no tena mitondra faisana amin'ireo hoditra mora. Mividy hoditra biby foana ianao isaky ny mihetsika, iharetan'ireo biby mandrapahafatiny ny fanaintainana.
Mampitombo ny lazàn'ny lamaody haingana ny kolontsainan'ny fandaniana, ary afenin'ireo mpandraharaha amin'ny vahoaka ny firindran'ny famokarana.
Tena mifono haratsian-toetra tanteraka ny famokarana hoditra biby mora vidy. Ny fikambanan'ny Vahoaka ho an'ny Fikarakaràna Ara-drariny ireo Biby (PETA) mipetraka any Amerika, dia nandefa lahatsary momba ny toerana fiompiana bitro Angora, mampiseho ireo mpiasa manao izay mamatotra ny tongotr'ireo bitro tsy hihetsika, ary misintona ireo hodiny na mamoly azy ireo mbola velona. Mivoa-drà ireo bitro. Volana telo aty aoriana, mbola tsy maintsy niatrika io fampijaliana io indray ireo bitro mampalahelo.
Amidy 18 RMB ny hoditra “raton laveur” ao amin'ny aterineto. Sary avy tamin'ny vondrona Facebook, “Tsia ho an'ny Hoditra biby Mora Vidy”.
Nandrakitra sarinà famokarana hoditra biby ihany koa ilay vondrona, avy tamin'ny sehatra fiantsenàna ao amin'ny Aterineto Taobao, mampiseho fa tsy vokatra voatr'olombelona akory ireo hoditra biby mora vidy any Shina fa avy amin'ireo biby tena izy:
Jereo ny lokon'ny hoditr'ireo “raton laveur”, tena mitovy amin'ny lokon'ireo hoditra eny amin'ny vozon'ireo akanjo mafana maro. Hitan'ny ekipanay avy tamin'ny Taobao fa amidy 18 RMB monja [eo amin'ny 3 dolara eo] ny hoditra “raton laveur” iray entina hanaingoana! Votsorana velona ilay biby mahafatifaty ho an'ny vola mitentina 18 RMB monja! Tsia hoan'ny hoditra biby! Ary aza ampijaliana ireo “raton laveur”!
Nanamarika an'izao ny tatitry ny PETA momba ny indostrian'ny hoditra biby ny taona 2010:
Tsy misy sazy ho an'ny fanararaotana ireo biby amin'ny toerana fiompiana fangalàna hoditra biby any Shina, izay mpanondrana hoditra biby betsaka indrindra eran-tany, mamatsy ny antsasany mahery amin'ireo akanjo afarana efa vita misy hoditra biby mba ho amidy any Etazonia.